रंगशालाको बार भत्काउने मुख्य आरोपी कँडेलसहित ४ जना रिहा, निकाले यस्तो विज्ञप्ति – Jaljala Online
जेठ २७, चितवन । चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको बारमा डोजर लगाएर भत्काएको अभियोगमा पक्राउ परेका मुख्य आरोपी प्रकाश कँडेलसहित ४ जना रिहा भएका छन्।
पक्राउ परेका चारै जनालाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको हो। रिहा भएका चारै जनालाई १२ दिनसम्म दैनिक हाजिरी जमानीमा छाडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ।
घटना घटाउने पक्षले क्षमायाचना गर्ने र भत्काएको बार पुनः निर्माण गर्ने विषयमा सहमति भएपछि उनीहरुलाई रिहा गरिएको हो। यसले रंगशाला निर्माणमा थप सहज वातावरण बनाउन सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
फेरी भारी वर्षाको सम्भावना, कुन क्षेत्रमा कस्तो हुन्छ ?
Posted on July 21, 2019 July 21, 2019 Author Jaljala Online
साउन ५, काठमाडौँ । ठूलो वर्षा गराउने मौसमी प्रणाली मनसुन न्यून चापीय रेखा भारतबाट नेपालतर्फ नजिकिँदै गरेकाले वर्षाको मात्रा पुनः बढ्ने क्रममा रहेको मौसमविद्ले बताएका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद् मञ्जु बासीका अनुसार हाल नेपालदेखि दक्षिण रहेको न्यून चापीय रेखा बिस्तारै उत्तर आउने क्रममा छ। त्यसैकारण नेपालमा मौसम बदली र वर्षा हुने क्रम क्रमशः बढ्दै […]
एक रातको रेट कति ? [नालीबेली]
Posted on August 27, 2019 Author Jaljala Online
सम्पूर्ण लाइभ/युवराज भट्टराई/सागर लामिछाने मगरले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् । साउन २९ गते, बुधबार स्थानः काठमाडौँ, सुन्धारा समयः साँझ ६ बजे सुन्धारा जाने बाटोमा भएका दुई आकाशेपुलमा मानिसको भीड अत्यधिक थियो। त्रिपुरेश्वरपट्टिको पुलमा फुटपाथ पसलेहरू इयरफोन र मोबाइलका ग्लासजस्ता सामान फिँजाएर बसेका थिए। पुलमा पाँचछ जना युवती यताउता गरिरहेका थिए। केहीले सलले मुख छोपेका थिए […]
‘मरेको भए यो संसार कहाँ देख्न पाउँथे र ?’ [नालीबेलीसहित]
जेठ २४, काठमाडौं । ‘अबचाहिँ गरेर खान्छे होला, यत्रो वर्ष घरमै गुम्सिएर बस्दा कम्ता सकस थिएन’, मझेरीमा भाडा माँझिरहेकी छोरीलाई संकेत गर्दै चमेली मगर बोलिन्, ‘पहिला कोठाभित्र नै अनुहार छोपेर बस्थी अहिले त बाहिर हिँड्दा पनि अनुहार देखाएरै हिँड्छे । अलिकति ढुक्क भएको छ मलाई ।’ यो खबर सागर बुढाथोकीले अनलाइनखबरमा लेखेका छन् । चमेली […]
लोकसेवा विज्ञापन: सरकार पछि हट्ला कि समिति ? अब के हुन्छ ?